को बन्ला नेपाली ‘अर्जुन रेड्डी’ ? « रंग खबर
को बन्ला नेपाली ‘अर्जुन रेड्डी’ ?
रंगखबर, काठमाडौँ : सुपरहिट दक्षिण भारतीय तेलुगु चलचित्र ‘अर्जुन रेड्डी’को नेपाली रिमेक भर्सन बन्ने चर्चासँगै यति बेला नेपाली रिमेकको लागी चलचित्र युनिट कलाकारको खोजी गरिरहेको छ । निर्माण तथा बितरणको लागी अुनमती लिएको युवा फिल्म्सले अहिले चलचित्रको लागी कलाकारको अडिसन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चलचित्रलाई बिशाल सापकोटाले निर्देशन गर्दैछ्न् । करिब १ वर्ष अघि नै निर्माण घोषणा भएता पनि कोरोनाका कारण चलचित्र केही समय पछि सरेको थियो ।
चलचित्रको लागी मुख्य नायक, नायिका र अन्य कलाकारको अडिसन गरिने बताइएको छ । केही महिना अघि नै अर्जुन रेड्डीको रिमेक बन्ने समाचार बाहिरिएको थियो । यो चलचित्रमा केही नायकहरुको नाम समेत जोडिएको थियो । युवा फिल्म्सको अनुसार केही दिनमै अडिसन गरिनेछ भने अडिसन दिनको लागी [email protected] मा इमेल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
दक्षिण भारतीय स्टार विजय देवगरकोन्डा अभिनीत यस चलचित्रलाई सन्दीप रेड्डी भङगले निर्देशन गरेका थिए । चलचित्रले बक्स अफिसमा ५१ मिलियन कमाइ गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । यही चलचित्रको हिन्दी रिमेक ‘कबिर सिंह’ गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको थियो । जसले निकै राम्रो व्यापार गर्न सफल भएको थियो । बलिउड अभिनेता साहिद कपुर अभिनीत चलचित्रले बक्स अफिसमा ३७९.०२ करोड कमाइ गरेको थियो ।